Say something here - MYSTERY ZILLION
April 2009 edited July 2009 in Idea
တခြားတော့ပစ်တွေမှာလဲ ပြောလို့အဆင်မပြေ၊ ဘယ်ဖိုရမ်အောက်မှာမှလဲ ရေးဖို့ category မကိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ပိုစ့်တွေ ဒီမှာ လာရေးစေလိုပါတယ်။
အဲ၊ မမ်ဘာအချင်းချင်း စကြနောက်ကြမယ်ဆိုရင်လဲ ဒီမှာ လာရေးလို့ရပါတယ်။
Off-topic ပြောချင်ရင်လဲ ဒီမှာပဲ လာပြောလို့ရပါတယ်။
Spamming and flooding တော့ မလုပ်ကြေးနော်...၏
Ubuntu ပေါ်မှာ မားကက်တင်းပရောဂျက်တစ်ခု လုပ်နေတာ MZ ကို၀င်ဖတ်မိတော့ ပြောချင်တာလေးတွေ ပေါ်လာတာနဲ့ ၀င်ရေးဖို့လုပ်တော့ zawgyi keyboard က Ubuntu 9.04 အတွက် မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို ၀င်ပြောရင်ရပေမယ့် ကျော်ဖတ်မယ့်သူက များနေတာကြောင့် ပရောဂျက်လုပ်လက်စကို ရပ်၊ Windows ထဲ boot ပြန်လုပ်၊ Zawgyi keyboard ဒေါင်းလုပ်ဆွဲချပြီး လာရေးနေတာ။
အဲ၊ နာရီကြည့်မိတော့မှ အခုနက ပိုစ့်တွေကို ရေးနေတာ ၁ နာရီကျော်ကြာသွားပါလေရောလား... အိမ်းးးး
Ubuntu 9.04 ကို သုံးနေကြတဲ့သူတွေ (မြန်မာပြည်က) ဘယ်သူများ ရှိပါသလဲ? Desktop customization လေးတွေ (ကိုယ်ပိုင်လုပ်ထားတာနော်) screenshot ဖမ်းပြီး တင်ကြရအောင်လား...
စကားမစပ် twitter နဲ့ facebook သုံးသူတွေအတွက် TweetDeck ဆိုတဲ့ Adobe AIR application လေးက သုံးလို့အတော်ကောင်းပါတယ်။
ခမ်းက Ubuntu ပေါ်မှာ အဲဒါနဲ့ သုံးနေတာ၊ လောလောဆယ်။
အဲ... Ubuntu မှာ Air သုံးရတာ အဆင်သိပ်မပြေဘူး.... မြန်မာစာတွေ ရိုက်လို့မရဘူးဗျ... အဲဒါတော်တော်ဆိုးတယ်...
ခမ်း မြန်မာလို ရေးခဲပါတယ် ကိုစေတန်။ Native Myanmar ထဲမှာက unicode တွေကို ရှောင်သုံးတာကြောင့် Win Kalaw ကို ပြန်ပြင်ထားတဲ့ font သုံးပါတယ်။ Keyboard driver မလိုပါ။ အခုတောင် ဇော်ဂျီကီးဘုတ်ကို ဆွဲချတာ ဒီမှာ၀င်ရေးဖို့ပဲလေ။ မနေ့ညထဲက အခုထိ Ubuntu ထဲ ပြန်မ၀င်ရသေးဘူးရယ်။ MZ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ၀င်ရေးသင့်တာလေးတွေ ၀င်ရေးရအောင်ပါ။
စကားမစပ် Ornagai ပရောဂျက်က အတော်ကောင်းပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါ။ အားပေးတယ်။ အဲ ဖိုရမ်ထဲလဲ လာပါဦးပေါ့ကွယ်၊ နော့...
ubuntu 9.04 အတွင် ရိုးရိုး install shell script နဲ့ package (zawgyi-keyboard-ubuntu904.tar.gz) ကတော့ထွက်နေပါပြီ .. download လုပ်ဖို့ အောက်ကလင့်လေးကိုသွားကြည့်လိုက်နော် ..
download zawgyi-keyboard for ubuntu 9.04 (shell script install)
tar ball ကို ဖြည်ပြီးရင် README လေး အရင်ဦးဆုံးဖတ်ပေးပါ .. အဲဒီမှာ installation guide လေးပါပါတယ်..
အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..
having fun with the lastest version of ubuntu 9.04!!!
Auto Update လုပ်လိုက်ရင် ဝင်လာတဲ့ ဘယ်သူမှ မသုံးတဲ့ ကီးဘုတ်ကြီးကတော့ တော်တော်ဆိုးတယ်။ အရင်တစ်ခါ ပြဿနာတက်ပြီးကတည်းက ဖြုတ်ရသလေ တတ်ရသလေ ဖြစ်နေတယ်။ ဗမာစာကီဘုတ်ပြဿနာက ခက်တယ်။ အခုအသစ်မှာလည်း ဒီလိုပဲလား ကိုသေတ္တာ အစမ်းအားသေးဘူး။:D
အဟား box02 ရေ၊ ကျေးဇူးပဲ။ မဟုတ်ရင် Vista ထဲ stuck ဖြစ်နေဦးမှာ။ အခုတောင် Atlantica Online တက်ဆော့ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ။ ကျေးဇူးပဲ။ ပြန်သွားလိုက်ဦးမယ် လင်းနစ်ထဲကို။
နောက်ဆုံး Ubuntu ရဲ့ final release ကို သွင်းပြီးတော့ နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲမသိ အရင် ၈.၁၀ တုန်းကလို totally smooth မဖြစ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် Flash plugin က ဒုက်ခနည်းနည်းပေးနေတယ်။ Lagging နည်းနည်းလေး ဖြစ်နေတယ်။ Millisecond လောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သိပ်အဆင်မပြေဘူး။
ကျန်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ပြသနာမတွေ့ပါ။ အခုသုံးသလောက်ကတော့ အတော်လေး stable ဖြစ်ပါတယ်။ ခမ်းလက်တော့ပ်နှစ်ခုလုံးမှာ GFX driver ကို အခုတန်းတွေ့တော့ Synaptics နဲ့ လုပ်စရာမလိုပဲ သက်သာတာပေါ့။ Hardware Driver ထဲမှာတင် Restricted Driver ကို enable လုပ်ရုံပဲကိုး။ 8.10 တုန်းက ASUS laptop ရဲ့ wireless driver ကိုပဲ recognize ဖြစ်ပေမယ့် အခု Acer laptop ရဲ့ Etheros wireless driver ကိုပါ တန်းသိပါတယ်။ အရင်က driver တွေလိုက်ရှာ၊ config ဖိုင်လ်တွေ လိုက်ပြင်နဲ့ wireless သုံးဖို့ အတော်ခေါင်းစားတာကလား။
အခုလောလောဆယ်တော့ wireless USB modem လေးနဲ့ အဆင်ပြေမပြေ သွားစမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
Modern အဆင်ပြေရင်ပြောအုံးဗျ... ကျွန်တော်လည်း အဆင်ပြေရင် အိမ်မှာ dial up ကို Ubuntu နဲ့ သုံးမလို့ဗျ..
အင် အဲ... အဲလို modem မဟုတ်ဘူးလေ ကိုစေတန်။ Thumb drive အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ ISP တွေက ထုတ်တဲ့ wireless modem အသေးလေးတွေကို ပြောတာ။ Vodaphone တို့ Optus တို့ကလဲ ထုတ်တယ်လေ။ ဂျပန်မှာလို WiFi က တတိုင်းပြည်လုံး နေရာအနှံ့ မရသေးခင်တော့ လက်တော့ပ်မှာပါတဲ့ wireless က hotspot ရှိတဲ့နေရာမှပဲ အသုံး၀င်တာကိုး။ ခမ်းက အင်တာနက်သုံးတာ၊ အလုပ်လုပ်တာ၊ academic project တွေလုပ်တာက တစ်နေရာထဲမှာမှ ငြိမ်ငြိမ်မနေတာ။ အနှံ့လျှောက်သွားနေတာ။ တစ်ချို့နေရာတွေဆို hotspot လုံးလုံးမရှိဘူးရယ်။
ကိုလူပျိုကြီး ပြောတာက Linux distro တွေမှာပါလာတဲ့ mm keyboard ကိုပြောတာထင်တယ်။
ကျနော်က ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် myanmar fonts တွေအကြောင်း သိပ်ဃဃဏဏမသိပါဘူး။
ဒီ ready made ပါလာပြီးသား mm xkeyboard symbol ဟာလဲ ဘယ်ကတည်းစပြီး linux distro တွေမှာပါလာလဲဆိုတာလဲ ကျနော်မသိပါဘူး..
ကျနော်စိတ်၀င်စားတာက ကျနော့်လို့ linux users တွေအဆင်ပြေမယ့် myanmar keyboard ရဖို့ပါ .. Linux users တွေ myanmar font နဲ့ keyboard ကိုလွယ်လွယ်ကူကူ install လုပ်နိုင်ဖို့ပါ .. ခု zawgyi font က အသုံးများနေတာကြောင့် ကျနော် ဒီ zawgyi-keyboard packages လေးတွေကို ၀ိုင်းကူလုပ်ပေးနေပါတယ် .. အကယ်၍များ အနာဂတ်မှာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ fonts တွေထွက်လာရင် အခွင့်အရေးများပေးခဲ့ရင် ကျနော်ဒီလိုပဲ ဆက်ပြီး ၀ိုင်ကူလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ် .. ကျနော်အရင်ကပြောခဲ့သလိုပေါ့ ဗန္ဓုလ ဖွန့်ထွက်လာရင်လဲ bandula-keyboard project မျိုးကို လုပ်ပေးချင်ပါတယ်.. တကယ်အသုံးများတဲ့ဖွန့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ ..
ဟုတ်တယ် ကိုလူပျိုကြီး လောလောဆယ်တော့ myanmar keyboard ကို Linux Distro တွေမှာ out-of-the-box သုံးလို့မရသေးပါဘူး၊ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီလို သွင်းသွင်းပေးရတာပါ ..
Fedora မှာဆို ပါလာပြီးသား myanmar font packages တွေကို အရင်ဆုံး remove လုပ်ပေးပါ .. ဥပမာ myanmar3-unicode-fonts, padauk-font packages တွေကို အရင်ဆုံး yum နဲ့ remove လုပ်ပေးသင့်တယ်၊ ပြီးရင် zawgyi-keyboard*.rpm ကို installl လုပ်ပေးရင် OK မှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ fonts packages တွေက font config system မှာရောသွားပြီး နေရာယူထားတဲ့အတွက် configuration conflict ဖြစ်ပြီး ဖွန့်တွေရိုက်ရတာမမှန်ဖြစ်နေတာပါ။
အဲဒီဖွန့်တွေလိုအပ်လို့ ပြန်သွင်းရင် manually ပဲ သူတို့ရဲ့ *.ttf တွေကို /usr/share/fonts/myanmar-fonts ဆိုပြီး folder ဆောက်ပြီး အဲဒီဖိုဒါအောက်မှာ သွင်းပေးလိုက်ပြီး fc-cache ကို run ပေးလိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ ..
good luck ကိုလူပျိုကြီး
ရပါတယ်ဗျား .. welcome ပါ ကိုခမ်း
ဟုတ်ပါတယ် ကိုခမ်း .. ခု ubuntu 9.04 ကတော့ ရေလယ်လန်းတယ်ဗျ 8.10 ထက်ကို features ရေ speed ရော တော်တော်လေးကောင်းလာတယ် အံမခန်းပါပဲဗျား
အခု Ubuntu 9.04 မှာ သွားစမ်းလိုက်အုံးမယ်။
အခုထိတော့ download count မှာ ကျွန်တော် ပထမပဲ။
ကျနော်ကလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား .. ပထမဆုံး download လုပ်တဲ့သူဆိုတော့ ဒီနှစ်အတွင်းထူးထူးခြားခြားကံကောင်းပြီးဗျား .. ကျနော် upload လုပ်တုန်းက ဆုတောင်းပေးထားတာလေးရှိတယ်လေ .. ပထမဆုံး download လုပ်တဲ့သူ ကံကောင်းပါစေလို့
Ubuntu 9.04 ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၀ယ်လို့ရနေပါပြီ ဒေါင်းလို့ကတော့ ဒီတစ်သက်ပြီးဖို့မမြင်လို့ (ထွက်ပေါက်ဆီကလည်း မကောင်းသေးဘူး )
ဒါမှမဟုတ် mmlrc မှာလည်း လာရောက်တောင်းယူနိုင်ပါတယ်..
၂၄ ရက်နေ့ ကတဲက download လုပ်တာ မနေ့ကမှ ရတယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေတဲ့ အတွက် ကိုဘောက် ကျေးဇူးပါ။
အခု Ubuntu ၉.၀၄ ကရေးနေတာပေါ့
ဟေးး .. သတင်းကောင်းလေးပဲဗျား .. ကိုသန်း၀င်းနိုင်နဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းသာမိပါတယ်ဗျား အိုကေ :67:
အွင်.. ကျွန်တော် မေးတော့ထုတ်ပေးတာ Ubuntu 8 ကြီး ဗျ..
fedora ကျတော ့9 ဘဲ ရတေးတာ..
နီးရင်တော့ လာကူးလို့ ရတယ်ဗျို့
လိုချင်ရင် pm နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်
Ubuntu 9.04 နဲ့ နာမည်ကလည်း ရယ်ရသား Jaunty Jackalope တဲ့
Wikipedia မှာ ဖတ်ကြည့်တော့ ပိုတောင် ရယ်ရသေးတယ်..
အရင် Ubuntu တွေရဲ့ နာမည်တွေက အသံတောင် ထွက်မဖတ်တတ်ဘူး :P
တစ်ခု ခက်နေတာက wubi.exe ( 9.04 ) က Window ထဲကနေ install လုပ်နိုင်တဲ့ feature မပါလာဘူး
အဲတော့.. HD ကို ကန့်ပြီး တင်မှ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်...
ကျနော်ကတော့ VMWare နဲ့ ဒီညစမ်းမယ်ဗျို့..
ဟုတ်ပနော် အပြုံး .. ubuntu code names တွေက တကယ့်ကို လန်းတယ် ..
ကျနော်ကခု နောက်ဆုံးထွက် ဒီ code name ကို ဒီလိုအသံထွက်လိုက်တယ် ..
Jaunty Jackalope = "ဂျောင့်တီး ဂျက်ကလုတ်ပ်" လို့ အဟဲ မှန်လားတော့ မသိဘူး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဟုတ်နေတာပဲ :112:
တကယ်တော့ သူ့ရဲ code names တွေက တကယ့်ကို အလန်းလေးတွေပါ ..
အင်း အပြုံးပြောတာက wubi.exe နဲ့ windows ပေါ်မှာ install လုပ်လို့မရတာလား?
ကျနော်တော့ အရင်ကတည်းက wubi ကိုမသုံးခဲ့တာကြောင့် ကောင်းကောင်း မသိပါဘူး.. နောက်ပြီး ကျနော်ကြိုက်တာကလဲ သီးသန့် partitions ခွဲပြီး သုံးရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် အမှန်ဆိုရင် wubi နဲ့လဲ အဆင်ပြေရမှာပါ .. ဘာလို့လဲ မသိဘူးနော် (it's strange).
ubuntu နဲ့ အဆင်ပြေပါစေ အပြုံး
OEM Laptop တွေက Partition ခွဲဖို့မလွယ်ဘူးဗျ... သူက recovery ပိုင်းပါလို့ partition ကိုခွဲလို့မရဘူး.. လက်ရှိ C: ကို format ချပြီး ခွဲမှ ရမယ်... အဲဒါဆိုရင် windows ကို အစကနေ ပြန်တင်ရလိမ့်မယ်ဗျ... ကျွန်တော် လည်း WUBI က DVD မှာ မရလို့ ညစ်နေတာ...
ကိုစေတန် .. ကျနော်ထင်တယ် ကိုစေတန့်စက်မှာ C: ကို Format လုပ်စရာလဲ မလိုဘူး၊ တကူးတကလဲ partitions ခွဲစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်၊ ကိုစေတန် အဲဒီ DVD ကနေ Install လုပ်ရင် Installer ကနေပြီး Partitioning Guided လုပ်ပေးပါလိမ့် .. အဲဒီ Partition Guide ရောက်တဲ့အခါ ကိုစေတန်ကို Graphical နဲ့ညွန်းပြပြီး ဘယ်လောက်ထားချင် ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ မေးပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီ install guide နဲ့သွားပြီးလုပ်ကြည့်နော်. အဲဒီ Installer က Hard disk ကို အပြီးအပိုင် သူ့ ubuntu အတွက် partitions မလုပ်မချင်း ကိုစေတန် HDD ဘာမှပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် စက်တခုနဲ့တခု မတူတာကြောင့် ကိုစေတန့် အရေးကြီးတဲ့ data တွေကို အရင်ဆုံး backup လုပ်ထားနော်
အဆင်ပြေပါစေ ကိုစေတန်ရေ ..
ရပါတယ်ဗျား .. Welcome ပါ ကိုခမ်း :1:
ကလိ ကလိ ဖြစ်ပြီး ပိုက်ပိုက်ကုန်အောင်တော့ လုပ်နေပြီ.....
အင်တာနက်က စျေးကြီးတယ်... အချိန်ရမှာ ဆိုင်မှာ သွားဒေါင်းပြီး စမ်းတော့မယ်....
ကိုရဲရေ .. ကျနော်ကတော့ ကောင်းတာလေးစားရရင် ခင်တဲ့သူတွေကို သတိရတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ၀ယ်ကြွေးမယ်လို့ .. အဲရောင်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သွားစားကြည့်လို့ အကြောင်းကြားတာ :112: အဟိ
ကိုရဲခမျှာ အင်တာနက်သုံးရတာအဆင်မပြေရှာဘူးထင်ပါတယ်၊ ဟိုတလောတုန်းကလဲ မြန်မာ dictionary လား အဲဒါရော download လုပ်ပြီး စမ်းသုံးဟန်မမြင်သေးဘူး :P
အဆင်ပြေပါစေ .. ကိုရဲ
ကိုရဲခမျှာ အင်တာနက်သုံးရတာအဆင်မပြေရှာဘူးထင်ပါတယ်၊ ဟိုတလောတုန်းကလဲ မြန်မာ dictionary လား အဲဒါရော download လုပ်ပြီး စမ်းသုံးဟန်မမြင်သေးဘူး
82MB လောက်တော့ ကျွန်တော် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အင်တာနက် အကောင့်က ကုန်ခါနီး ဖြစ်နေလို့ပါ။
ကျွန်တော်က စက်နဲ့တင် ပြဿနာ တတ်နေတာ။ အရင်တုန်းက wibi နဲ့ တစ်ခါမှ မတင်ဖူးလို့ မနေ့က 8.10 ကို wibi နဲ့ တင်လိုက်တာ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ တင်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ reboot လုပ်လိုက်တာ ubuntu loading တတ်လို့ ပြီးခါနီးလည်း ရောက်ရော out of range ဆိုပြီး ဘာမှ ပေါ်မလာတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဒီနေ့ နောက်တမျိုး စမ်းမယ်ဟ ဆိုပြီး စက်အသစ်မှာ သုံးထားတဲ့ ဟက်ဒစ်လေးကို ဖြုတ်ပြီး server လုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့ Core2Duo စက်အဟောင်းလေးကနေ ဖွင့်လိုက်ရော အေးအေးဆေးဆေး သုံးလို့ ရသွားတယ်။ :P
အခုစက်ကို တော်တော် စိတ်ကုန်နေပြီ။ window sever 2003 လည်း တင်မရ။ ubuntu 8.10 ရော။ 8.0.4 လည်း တင်မရဘူး။ window7 တင်ရင်တော့ အဆင်ကို ချောနေတာပဲ။ ဘာကောင်မှန်းမသိဘူး။ တော်တော် အကောင်းကြိုက်တဲ့ကောင်။ နောက်အဲဒီလို ကောင်တွေကို ေ၀းေ၀းရှောင်တော့မယ် အကိုရေ... မှတ်သွားပြီ
စက်အဟောင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ driver တွေ run ပြီးတော့ အခုစက်မှာ ပြန်ဖွင့်တော့လည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ။ အသံတော့ ကြားရတယ်။ ဟီး...
တုန် တ တုန် တုန် လေး....
မမြင်မစမ်းနဲ့ သုံးရမဲ့ သဘောရှိတယ်။
အင်း အဲဒီ out of range ပြသာနာက graphic card နဲ့ဆိုင်လားမသိဘူးနော် ..
အသံကြားရတယ်ဆိုတော့ အနောက်မှာ system ကတော့ run နေပြီး မမြင်ရတာဖြစ်မယ်..
အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး google မှာရှာကြည့်သေးလား ကိုရဲ ..
Linux drivers တွေက အရမ်းသစ်လွန်းတဲ့ hardware တွေအတွက် develop လုပ်နေသေးတာမို့ တစ်ခုခုလိုအပ်နေတာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် .. နောက်အသစ်ထွက်မယ့် Linux Kernel ဒါမှမဟုတ် Release တွေမှာ အဆင်ပြေလာလိမ့်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ် ..
အဆင်ပြေပါစေ ကိုရဲရေ ..
ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့ ကျွန်တော်လို လူတွေ တော်တော်များတယ်။ board တွေက စပို့မလုပ်လို့ ဖြစ်တာများတယ်။:d
ဟဲဟဲ .. ဖြစ်ရမယ်လေ .. :112:
အဆင်ပြေလာမှာပါ .. ubuntu 9.04 နဲ့လဲ စမ်းသပ်ကြည့်ပါအုံး .. သူကလဲ Hardware အသစ်တွေကို support လုပ်မယ်ထင်ပါတယ် .. အရင်က ubuntu 8.10 နဲ့ 8.04 တုန်းက ကျနော့် ATI card ကို auto install မလုပ်ပေးဘူး .. ခုဒီ ubuntu 9.04 မှာတော့ အလိုအလျှောက် install လုပ်ပေးပါတယ်.. Desktop Effects တွေကိုလဲ ubuntu 8.10 တုန်းကအတိုင်းပြန်ထားတာ အရင်ကထက်ပိုမြန်လာတာ တွေ့ရတယ် ကိုရဲ ..
ဘာမှမပူပါနဲ့ .. နောက်ထွက်လာနေတဲ့ Release အသစ်တွေနဲ့သာ စမ်းကြည့်ပါ .. ၀ယ်စရာမှ မလိုပဲနော် .. ကြိုက်သလောက်ဒေါင်း ကြိုက်သလောက်သွင်းပြီး စမ်းလို့ရပါတယ် ..
၀ယ်စရာမှ မလိုပဲနော် .. ကြိုက်သလောက်ဒေါင်း ကြိုက်သလောက်သွင်းပြီး စမ်းလို့ရပါတယ် ..
၀ယ်လည်း မ၀ယ်ဘူး။ ဒေါင်းလည်း မဒေါင်းဘူး။ လှမ်းမှာမယ်... ဟီး
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စမ်းပြီး ubuntu 8.10 တုန်းက လှမ်းမှာတာ အလကား ပို့ပေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စမ်းပြီး ပို့လို ပို့ငြား လှမ်းမှာလိုက်ဦးမယ်... ကုမ္မဏီထုတ် အစစ်သုံးတာပေါ့။။ ဟီး..
But it takesalong time,3weeks to reach here. And I have to remind you, use your REAL BURMESE NAME in your NRIC when you order. Otherwise, the custom in MM will pull your leg
အနော့် computer က window တက်ပြီးခနနေတော့ ဘာမှနှိပ်လို ့မရတော့၀ူး...။ cd rom ကလည်းမကောင်းတော့၀ူး...usb နဲ့boot လုပ်ရင်ရမလားမသိ၀ူး..။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်..။ကူညီကြပါနော်...။အနော့်ကို..:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77: